FBA Mhepo - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
YiXing Global Logistics yakagadzira hukama hwenguva refu uye hushamwari hwekudyidzana pamwe neakawanda ndege dzeAmerica senge UPS, DHL, Federal, United Airlines, nezvimwewo, uye inogona kupa vatengi mutengesi neFBA kutakura nhumbi uye kuratidza basa.
Kufukidza kunhonga, kurongedza, kuchengetera, kubvumidzwa kwetsika, kubhuka, kuendesa, inishuwarenzi uye mamwe masevhisi-amwe.
Kutumirwa kwemhepo kuUnited States mashandiro
Kubatsira kweAir Shipment Service
-Security zvakanakira: Iyo yose nzira yekutevera, munhu akazvipira anoona nezvekuona kuchengetedzeka uye kwakakodzera kuendesa kwezvinhu; Kurasikirwa kwezvinhu, kukuvara kwezvinhu zvinokurumidza kuita zvirevo.
-Price mukana: Makumi mana epasi rose expression, akati wandei ndege dzenyika dzakawanda dzakanangana kubatana, hapana epakati zvinongedzo, akanaka uye akajeka mitengo.
-Time mukana: Kugona kwetsika kugona, huwandu hwevamiriri vemhiri kwemakungwa Kuchenesa kugona kusvika 99%; Ronga kuendesa mota pamberi.
-Service zvakanakira: Imwe-yekumira sevhisi. Gadzirisa zvinonzwisisika zvinhu uye chirongwa chekufambisa; Ipa izere renji yezvinhu zvinoenderana nebasa. Nyanzvi dzezvehunyanzvi dzinobata nematambudziko nenzira yakakodzera.
Zvinyorwa zveMhepo Yekutakura kuenda kuUSA: Zvinyorwa zvinodiwa kana machira / mbatya dzichiendeswa kuUnited States nendege.
1. Invoice yekutakura nendege, runyorwa rwezvinhu, tsika yekupinda mutsika (fomu 7533) kana kumhanya kwekupinda (fomu 3461). Rondedzero yezvinhu zvinoshandiswa kutsanangura kukosha uye mufananidzo wezvinhu.
2. Tsika dzinofanirwa kuziva zita remutengesi, uye uyo anotumirwa anofanirwa kuratidza kutsika kuti zvinhu zvatorwa kunze, saka panofanirwa kuve ne "chitupa chekutakura".
3. Kurongedza runyorwa. Kana zvichidikanwa, mamwe magwaro anodiwa anogona kuendeswa kuti ave nechokwadi chekupinda kwakanaka kwezvinhu. Mushure mekuzadza mafomu ekupinda, mutengesi anobva ataura mutero uye anobhadhara mari inofungidzirwa yemitero neyekugadzirisa. Mune zvimwe zviitiko, panogona kunge paine mamwe mabasa, ayo anoda dhipoziti.